Izinyoni zasolwandle zisiza ukunciphisa ukufudumala kwe-Arctic | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izinyoni zasolwandle zisiza ukuhamba kancane kwe-Arctic
Izinyoni zasolwandle ziyasiza ekwehliseni ukufudumala kwe-Arctic, futhi bakwenza ngendlela ethakazelisa kakhulu ngokusho kocwaningo olushicilelwe kumagazini wesayensi i-Nature.
Kule ngxenye yomhlaba, amazinga okushisa anyukayo abangela izinkinga ezinkulu, yize zingekho lezi zilwane, isimo besizoba sibi kakhulu.
UGuano, umfelandawonye ongalindelekile we-Arctic
Kunjalo. I-guano yiyona ebambezela ukufudumala. Ososayensi balinganisele ukuthi kufinyelela kumathani afinyelela ku-400.000 we-guano ebusweni ngesikhathi sokufuduka nesokudlekeka kwalezi zilwane ezinhle. Kepha ayisetshenziswanga ukuvundisa kuphela inhlabathi nezitshalo ezingakhula kuwo, kepha futhi kubangela ukwakheka kwamafu okuphezulu kwe-albedo, ekhiqiza ukupholisa okumaphakathi kwama-watts angu-0,5 ngemitha eyisikwele.
Akukuningi, futhi empeleni akwenzeli ukufudumala kwe-polar, kepha lokhu okutholakele esikhathini esifushane noma esimaphakathi kungahle kusetshenziselwe ukuthuthukisa uhlelo lokusebenza olusebenzayo lokuvikela i-Arctic wezinguquko ezisheshayo ezenzekayo kwisimo sezulu somhlaba futhi ikakhulukazi emapalini.
Izinhlayiya ze-ammonia ezivela ku-guano zifaka isandla ekwakhekeni kwamafu, abonisa ukukhanya kwelanga, okukubuyisela esikhaleni.
Izinhlayiya ze-ammonia, ezikhona ku-guano, empeleni zigxile emakholoni, kepha njengoba zincane kakhulu, zingabonakali ngeso lomuntu, umoya uyazithatha, uzisakaze esifundeni sase-Arctic.. Ngale ndlela, kunikezwa izimo ezifanele zokwakheka kwamafu okuzokhombisa ukukhanya kwelanga, ngaleyo ndlela kuvimbele amazinga okushisa ukuthi anyuke futhi umhlaba nolwandle kungashisi.
Impela ukutholakala okuthakazelisa kakhulu, awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izinyoni zasolwandle zisiza ukuhamba kancane kwe-Arctic
Kungani iziphepho zenzeka eSpain?
Leli yifu lesiphepho elenza abantu base-Argentina nomhlaba bathandane